Laga yaabaa 2019 | Save A tareenka
Month: Laga yaabaa 2019
Home > Laga yaabaa 2019
Waqtiga Akhriska: 4 daqiiqo Waxaa jira badan oo sababaha ay dadku u jecel yihiin in ay u safraan. Mid ka mid ah kuwa aad inta badan maqli karo waa awooda u leedahay waayo aragnimo cusub oo xiiso leh. Maxaa ka dhigay safar si qurux badan yahay in shakhsiyaad kala duwan la faraxsan doonaa waxyaabo kala duwan. Adrenaline junkies…
Waqtiga Akhriska: 4 daqiiqo farshaxanka Street waa nooc casriga ah ee ra'yi dhiibashada farshaxanka dhigaya magaalooyinka dheeraad ah oo qurux badan. A kabarta jidka wanaagsan sidoo kale loo Waxyoodo ahayn laga yaabaa in aad ka fekerto maaddo bulsho muhiim ah ama idin xusuusiyo shuqullada sayid classical. Magaalooyinka Yurub waxaa ka buuxa…
Wadohoose Stations xiiso Oo dhulka hoostiisa mara Art
Waqtiga Akhriska: 3 daqiiqo Art dhulka hoostiisa mara ee saldhigyada tareenka u muuqataa in matxafka cusub ee dadka. Waxay noqonayaan kuwo cusub waa-arko meelaha fanka iyo design dunida. Yaa ka malaysan lahayd? Qaar ka mid ah meelaha caamka ah ugu dhiirigalin, ku darista farshaxan ballaaran iyo qaabeyn ayaa laga heli karaa…
Tareenka Safarka Iswidhan, safarka Europe
Waqtiga Akhriska: 4 daqiiqo Hostels ayaa raabka u xun isagoo wasaq, aragdarnaan, iyo da'day. Laakiin ma ogtahay in hoteelada hadda la casriyeeyay? Waayo, kuwa aan garanaynin waxa hostels yihiin, huteelka uun uma khaldin oo waanu la orodnay. Hostels yihiin fududeynta cheap…
Waqtiga Akhriska: 5 daqiiqo Marka in search of dukaamada ugu fiican guridda in Europe, aad tahay ma aha oo kaliya ugu jirnaa kuwa xabbadood Xisbiyada Mucaaradku. sidoo kale waxaad ka qaadan safar hoos haadka xusuusta iyo sahaminta taariikhda. dukaanka A guridda ka dhigan tahay museum fashion ah, tilmaam u ah dhaqanka magaalada…